एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठको टिप्पणी : वर्तमान सरकार असफल सरकारको रुपमा स्थापित भयो, अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
(Monday 17th January 2022)
एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठको टिप्पणी : वर्तमान सरकार असफल सरकारको रुपमा स्थापित भयो, अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आईतबार
‘राष्ट्रिय सहमतिविना एमसीसी पेश गरिए पास हुन गाह«ो छ’
प्रधानन्यायधीशले मात्रै राजीनामा दिएर न्याय प्रणालीमा सुधार हुन्छ र ?, नेपाल बारले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ ः महासेठ
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेकपा (एमाले) का नवनिर्वाचित सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनैपनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकारलाई अपवित्र गठबन्धनको सरकारको पनि संज्ञा दिए ।
आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले अहिले ताजा जनादेशको आवश्यत्ता औंल्याए । उनले भने,‘अहिले देशमा अपवित्र गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकार दिशाहिन तरिकाले अघि बढिरहेको छ । यो सरकारले अहिलेसम्म कुनैपनि क्षेत्रमा उपलब्धि हाँसिल गरेको छैन । चाहे त्यो विकासको क्षेत्र होस, वा स्वास्थ्य क्षेत्र होस, निर्माणको होस वा बजेट कार्यान्वयनको सवाल होस, अथवा विदेशी नीतिको सवाल होस, यो वर्तमान सरकार कुनैपनि क्षेत्रमा सही तवरले अघि बढेको छैन । यो सरकार असफल सरकारको रुपमा स्थापित भएको छ । यो सरकारले केही गर्न सक्दैन भनेर जनताले बझेका छन् ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमालेले ताजा जनादेशको माग गरेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘अब देशलाई बन्धक बनाएर राख्नुभएन, नयाँ निर्वाचनतर्फ जानुपर्छ । त्यो माग हामीले गरिसकेका छौं । जतिसक्दो छिटो जनताको बीचमा जान सकियो, त्यो नै जनताको लागि पनि हित हुन्छ, अब निर्वाचनको विकल्प छैन् । एमाले जहिले पनि जनताको बीचमा जान तयार रहेको थियो, छ र रहनेछ । हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ । उहाँले सुत्तामा हुँदापनि यो कुरा भन्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धनभित्रैबाट पनि निर्वाचनमा जाने विषय भएको छ ।’
महासेठले वर्तमान सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन पनि गर्न नसकेको र त्यो त एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको दाबी गरे । उनले थपे–‘अब यो सरकार जानुपर्छ, सत्ताभन्दा बाहिर जानुपर्यो । सरकारलाई फाल्नको लागि दुईवटामात्रै विकल्प छ, या त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्यो, वा होईन भने निर्वाचनमा जानुपर्छ । हामी अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छैनौं । हामी त यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको थियो त्यो कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ भनेर बसेका थियौं । अहिले थाहा भयो नि ।’
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही मंसिर २८ गतेको लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गर्दै उक्त दिन आफूहरुले कारबाही गरिसकेका सांसदहरुको उपस्थिति रह्यो भने पार्टीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए । उनले भने–‘यो संसद्को अधिवेशनको अवधिमा वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ ? त्यो हामी हेर्छौं । जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, एमालेको सवाल छ । एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुलाई संसद्मा प्रवेश दिईयो भने हामी फेरि पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्छौं ।’
महासेठले नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर गरेको आन्दोलन गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले भने,‘नेपाल बारले जुन प्रकारले आन्दोलन गरिरहेको छ, यसले राम्रो सन्देश गएको छैन् । यसले न्यायसेवा प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायधीशले मात्रै राजीनामा दिएर न्याय प्रणालीमा सुधार हुन्छ र ? हिजो असार २८ गते परमादेश जारी गर्दा के त्यसमा प्रधानन्यायधीशमात्रै संलग्न हुनुहुन्थ्यो र ? बारले जुन आन्दोलन अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । राजीनामा दिनैपर्छ भने प्रधानन्यायधीशले मात्रै किन राजीनामा दिने ? विवादित कुरामा संलग्न सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्छ । कसैलाई बलीको बोको बनाएर, कसैको ईच्छा होला प्रधानन्यायधीश बन्ने, कसैलाई यो सोच होला, न्यायालयले राम्रो काम गरेन भनेर हिजो आलोचना भएको थियो । हिजोको रहस्य अहिले खुलेको छ। परमादेश जारी गरेर गुण लगाएको र तिर्छु भनेर नेताहरुले भनेको पनि सुनियो । अब कसरी गुण तिर्नुहुन्छ, होला केहीलाई राजीनामा गराउने होला, कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने होला । नेपाल बारले यो आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ ।’
उनले अहिले देशमा न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको र यसको कारण वर्तमान सरकार नै भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘न्यायसेवा अवरुद्ध भएको छ, यो सरकारको कारणले हो । अपवित्र गठबन्धनले कसरी न्याय प्रणालीले प्रयोग गरेको हो ? भन्ने कुरा छर्लङ भएको छ। सारा नेपालीले बुझेका छन् कि षड्यन्त्र गरेर ओलीको सरकारलाई हटाएको कुरा बुझिसकेका छन् । कुनैपनि क्षेत्रमा यो सरकार सफल र स्थापित हुन सकेन । विदेश नीतिमा यो सरकार केही तयारी नगरीकन अघि बढ्यो । बिना तयारी अमेरिका, बेलायत र चीनबाट राजदूत फिर्ता गरेको छ, तर तुरुन्तै राजदूत पठाउन सकेन । धेरै कमजोरी छन् ।’
सरकारले एमसीसीको एजेण्डा संसद्मा ल्याएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने सुनाए । उनले भने,‘पहिले सरकारले एमसीसी एजेण्डा ल्याओस, त्यसपछि मात्रै हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छौं । देश र जनताको अहित हुनेगरि कुनैपनि सम्झौता पास गर्न दिँदैनौं । देश र जनताको हितमा छ भने राम्रै कुरा हो । राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी सदनमा पेश भयो भने एउटा वातारण बन्छ, होईन राष्ट्रिय सहमति नगरी पेश भयो भने पास हुन गाह«ो छ।’
महासेठले आफूहरुले भर्खरै हाीले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल रुपमा सम्पन्न गरेको र यो ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न भएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो १०औं राष्ट्रिय महािधवेशलेन देशमा एउटा सन्देश दिएको छ–अहिले पार्टीबाट केही नेताहरु चोईटिएर गएपनि अहिलेपनि एमाले यो देशको मूल प्रवाह र पार्टीको रुपम अघि बढेको छ। एमालेबाहेक अरु कुनैपनि पार्टीले वामपन्थी शक्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन सक्दैन् भन्ने सन्देश पनि यो महािधवेशनबाट गएको छ । एमाले विभाजन भएको धेरै दिन भएको थिएन, तर हामीले ऐतिहासिक महाविधेनश सम्पन्न गरेका छौं । बन्दसत्र र खुल्लासत्रले के स्थापित गरेको छ भने अब एमाले विभाजनले पनि खासै फरक गरेको छैन् । नेपालको ईतिहासमा यत्रो मानवसागर कहिल्यैपनि देखिएको थिएन । विधान महाधिवेशनअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने काम गरेको छ । हाम्रो पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले यो देशलाई नयाँ दिशातर्फ हाँकेर अघि लैजानेछ। कम्युनिष्ट आन्दोलनसँगै नेपालको विकास र समृद्धि, सामाजिक सद्भावलाई, राजनीतिसँगै कसरी समेटेर लैजाने भनेर अहिले त्यो जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको छ ।’
उनले एमाले विभाजन हुने सम्भावना नरहेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘अब एमाले विभाजन होला भन्ने सम्भावना छैन् । एमाले एकताबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको छ । पराजित भएका साथीहरु पनि पार्टी बलियो बनाउन लाग्नुभएको छ । अब पार्टी विभाजनको त टाढा–टाढा पनि त्यस्तो सम्भावना छैन ।’
मानहुँकोट बतास समुहलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल अगाढी नबढाउन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ३ माघ । तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल अगाढी नबढाउन सर्वोच्च
मधेश नाम पारित
जनकपुरधाम, ३ माघ । प्रदेश २ को नाम मधेश भएको छ । आज प्रदेश सभाको
अख्तियारमा उजुरी परेपछि धुर्मुस-सुन्तलीको यस्तो आग्रह (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं, ३ माघ । धुर्मुश र सुन्तलीले क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा कुनैपनि अनियमितता नभएको र दाताहरुको
पशुपति धर्मशालामा बताससँगको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सुझाव
काठमाडौं, ३ माघ । बतास अर्गनाइजेशनसँग पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई
काठमाडौँ, ३ माघ । आज नेपालमा कोरोना भाइरसका ६ हजार ७ सय ३४ जना संक्रमित
श्रममन्त्री श्रेष्ठको सय दिन, यस्ता छन् उपलब्धि(पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ, ३ माघ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सय दिनमा गरेका कामको
काठमाडौँ, ३ माघ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा
प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम
जनकपुर, ३ माघ। प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको छ । आज
कोरोना संक्रमण झन् फैलिएपछि सरकार कडाई गर्दै
काठमाडौं, ३ माघ । कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् बढेको छ । हिजोभन्दा आज संक्रमित दर
जसपा र लोसपा ‘मधेश’ का लागि एक ठाउँमा
काठमाडौं, ३ माघ । विभाजित भएर बनेका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पहिलोपटक
मधेशमा भोलि बिदा
जनकपुरधाम, ३ माघ । मधेश प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । प्रदेशको नाम मधेश